साबधान : सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै हुनुहुन्छ?५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्न सक्छ! – Newsharpal24
साबधान : सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै हुनुहुन्छ?५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्न सक्छ!
April 8, 2021 adminLeaveaComment on साबधान : सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै हुनुहुन्छ?५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्न सक्छ!
काठमाडौं, चैत २६ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले कांग्रेसबाहेकका सांसदको बहुमतबाट पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न लागिएको हो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कांग्रेस सांसदको विरोध हुँदाहुँदै समितिबाट माओवादी र एमाले सांसदले बहुमतका आधारमा २०७६ पुस दोस्रो साता पारित गरेका थिए । विधेयकका प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुनुका साथै यसले नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक हक हनन गर्ने भएकाले कांग्रेस विधेयकको विपक्षमा रहेको सांसद सञ्जय गौतमले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट
अति संवेदनशील मुलुुकको सूचीबाट हटाएर संवेदनशील मुलुुकको सूचीमा राखेसँगै नेपालीलाई कोरिया खुकुलो!
प्रधानमन्त्री ओलीसँग विप्लव असन्तुष्ट, भेटेरै पोखे गुनासो
प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा सर्वोच्चले रोक्यो !